वरिष्ठ समलोचक डा. कुमार बहादुर जोशी ,(साहित्यकार रमण घिमिरे )
(फोटो सौजन्य: रमण घिमिरे)
वरिष्ठ समालोचकसँग भएका निम्न मूख्य विषयहरु लगायत अन्य थुप्रै प्रसँगमा कुराकानी भएको छ:
क्लिष्ट र दुरुह कविका रुपमा चिनिने मोहन कोइरालाको सरल र सरस कृति कुन हो ?
बालकृष्ण सम पहिले आस्तिक अनि पछि नास्तिक कसरी भए?
नेपाली साहित्यमा नयाँ नौलो प्रवृत्तिका रुपमा के प्रादुर्भाव भएको छ ?
सम, देवकोटा र पौडेलका जस्ता रचनाहरु किन हुन सकेनन् ?
नेपाली साहित्यमा सबैभन्दा बढि प्रचलनको विधा कुन हो ?
नेपाली परम्परालाई नै फेर्न सक्ने खालका साहित्यको रचना भएको पाईन्छ?
समकालिन नेपाली साहित्य कस्तो छ ?
भानुभक्तको रामायणमा प्रगतिशीलता खोज्नुको के औचित्य छ ?
डा. कुमार बहादुर जोशीसँग इर्ष्या गर्नेपनि रहेछन्, किन होला?
दुईदुई पटक मृगौलाको प्रत्यारोपण गरिसकेका डा. जोशीको साहित्यिक क्रियाकलाप कस्तो रहेको छ ?